राहुल गान्धी फेरि काठमाडौंमा ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राहुल गान्धी फेरि काठमाडौंमा !
काठमाडौं । तीर्थाटनका लागि भदौ १५ मा काठमाडौं हुँदै ल्हासा पुगेका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी एक सातापछि आइतबार सुटुक्क काठमाडौं भएर दिल्ली फर्केका छन् । उनी आइतबार दिउँसो करिब साढे दुई बजेको इन्डिगो एयरलाइन्सको उडानबाट दिल्ली फर्केका हुन् । उनी आठ रात तिब्बतमा बसेर नेपाल फर्केका हुन् ।
शुक्रबार राति उनी काठमाडौंका एक स्थानीय मारवाडी व्यवसायीसँग बौद्धनाथ स्तुपा घुमघाम गरेका थिए । उनी राति पाटन र स्वयम्भु पनि पुगेका थिए । बौद्ध स्तुपामा गान्धीले आफ्ना साथी र परिवारसँग तस्बिर खिचाएका थिए । राहुलले शाकाहारी भोजन खाएको कि मांसाहारी भन्ने बहस भारतीय टिभीमा भइरहेको छ । नयाँपत्रिकाबाट
काठमाडौंको एउटा कलेजमा ११ कक्षामा पढ्ने किशोरले बल...
काठमाडौं ३ मंसिर । सरकारले तोकेभन्दा बढी मुल्य लिन...
गाईको पनि जन्मदर्ता !
काठमाडौं । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले छाडा...
अभिनेत्रीले भनिन् : श्रीमानले यौन शोषण गरे
भारतीय टेलीसिरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ की चर्चित ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफुलाई दिन नेकपा...